I-Kate Kelland Archives - I-US Ilungele Ukwazi
IMonsanto Exec Yembula Isabelomali Esingama- $ 17 Million Semisebenzi Elwa ne-IARC, Imizamo YePro-Glyphosate
Posted on Mashi 27, 2019 by UCarey Gillam
UMonsanto wayefuna kabi kangakanani ukudicilela phansi ososayensi bomdlavuza bamazwe omhlaba abathola ukuthi i-glyphosate herbicide yenkampani iyingozi yomzimba womuntu futhi yaphromotha umyalezo ophikisayo wokuphepha kwe-glyphosate? Okubi ngokwanele ukwaba cishe amaRandi ayizigidi eziyi-17 kulowo mkhankaso, ngonyaka owodwa nje vo, ngokobufakazi obutholwe ngabameli abamele izisulu zomdlavuza abammangalela uMonsanto.
Leyo mininingwane neminye emayelana nokusebenza kwangaphakathi kokusebenza kobudlelwano bomphakathi eMonsanto kuvele ngoJanuwari 22 ukubekwa okuthekhishwe ngevidiyo wesiphathamandla seMonsanto uSam Murphey. Umsebenzi kaMurphey eMonsanto wawuhlanganisa ukuqondisa ubudlelwano nabezindaba emhlabeni wonke kanye "nemizamo yokugqugquzela ukwesekwa kwamacala amakhulu, izindaba zenqubomgomo kanye nezinsongo zokudumisa" ezibandakanya ibhizinisi lenkampani elisebenzisa i-glyphosate based herbicide. Futhi olunye lwezinsongo ezinkulu lwaqhamuka kulabo bososayensi bomdlavuza. UMupihey manje usebenzela iBayer ngemuva kokuthi inkampani yaseJalimane ithenge iMonsanto ehlobo eledlule.
Ijaji lesifunda sase-US uVince Chhabria akazange akuvumele ukudalulwa kukaMurphey kwesabelomali esimelene ne-IARC ukuthi kwethulwe njengobufakazi ecaleni likaHardeman V. Monsanto, eliye enkantolo labamangalelwa ngoLwesibili. Amajaji kulelo cala laseSan Francisco asevele anqume ukuthi iMonsanto's glyphosate-based Roundup idale iHardeman's non-Hodgkin lymphoma, kepha manje isisindo somonakalo.
Kepha ubufakazi bukaMurphey kulindeleke ukuthi bethulwe e Isilingo sikaPilliod V. Monsanto ophethe ukukhetha amajaji e-Alameda County Superior Court e-Oakland, eCalifornia ngoLwesibili. Amaqembu akhethe ijaji elinamalungu ayi-12 nezinye izindlela ezinhlanu zokushintshana. Izitatimende zokuvula kuleli cala kulindeleke ukuthi zibe ngoLwesine.
Sekuyiminyaka emine i-International Agency for Research on Cancer (IARC) ibukeza izincwadi zesayensi ezishicilelwe nezibuyekezwa kontanga maqondana ne-glyphosate futhi yathola ukuthi i-herbicide kungenzeka ukuthi ibanga umdlavuza, inenhlangano ethile ne-non-Hodgkin lymphoma. I-IARC iyingxenye yeNhlangano Yezempilo Yomhlaba futhi ihlukanise izinto ezingaphezu kwe-1,000 XNUMX ngokuqondene nomdlavuza wazo, imvamisa ngaphandle kwengxabano enkulu.
Kodwa i-glyphosate yayihlukile. Ukulandela ukuhlukaniswa kukaMashi 2015, amakhulu, bese kuba yizinkulungwane, zabantu abatholwa ukuthi bane-non-Hodgkin lymphoma ngemuva kokuvezwa kwemithi yokubulala ukhula kaMonsanto bafaka isimangalo kulowo mdondoshiya we-agrochemical.
Futhi ngemuva nje kokwehlukaniswa kwe-IARC kwe-glyphosate - nokuqhubeka kuze kube namuhla - ososayensi bomdlavuza baba yisihloko sokulahlwa okuvela ezinhlakeni ezithile zezinhlangano, abantu ngabanye kanye nabashayeli bomthetho abathile baseMelika. Babekwe amacala okuthi abasebenzeli isayensi ezwakalayo kepha basebenzela i-ajenda yezepolitiki, idatha yokukhetha ama-cherry, nokukhuthaza isayensi ye-junk, phakathi kokunye. Ukugxekwa kukhulisiwe futhi kwaphindwa emhlabeni jikelele kuma-athikili ezindaba, izingcezu zemibono, amabhulogi, izikhangiso ze-Intanethi ze-Google nokuningi.
Imibhalo yangaphakathi yeMonsanto eye yavela ngokutholakala kwamacala angaphezu kwe-11,000 afakwe enkampanini ikhombisa ukuthi phakathi kwamanye amaqhinga, iMonsanto ibisebenzisa abantu besithathu ngasese ekuthumeleni imiyalezo nge-anti-IARC ngoba abaphathi benkampani kanye nabamele ubudlelwano bomphakathi babecabanga ukuthi imininingwane izovela kakhulu okuthembekile okuvela ezinkampanini ezihlukene neMonsanto.
Esikhundleni sakhe, uMurphey wabuzwa ukuthi inkampani yachitha malini ukuzama ukungabaza ukuhlukaniswa kwe-IARC.
Ummeli wommangali uPedram Esfandiary: "Ngakho-ke kuliqiniso ukuthi iMonsanto yabelwe izigidi zamadola ekuphenduleni ukuhlukaniswa kwe-IARC, akunjalo?"
UMurphey: "Si - sine - bekumele sisebenzise inani elikhulu lezinsizakusebenza, ngaphezu kweminyaka eminingana manje, silungisa ukwaziswa okungelona iqiniso, futhi siphendula imibuzo emphakathini mayelana - ne-glyphosate."
U-Esfandiary: "Ngabe iMonsanto yabele izigidi zamarandi ukuphendula ukuhlukaniswa kwe-IARC?"
U-Esfandiary: "Uyazi ukuthi iMonsanto yabelwa malini ngo-2016?"
UMurphey: "Ngingakhuluma kuphela ngokwesimo sezinto, uyazi, izinto eziphathelene nomphakathi, uyazi, izinto ebengizobandakanyeka kuzo ngqo. Kodwa ngo-2016, uyazi, ngiyakholelwa kwamanye amaphrojekthi ebengibambe iqhaza kuwo , kwakucishe kube yizigidi eziyi-16 noma eziyi-17. ”
I-Esfandiary: “$ 16 noma 17 million… yabelwa ukuphendula ukucaciswa (stet) kwe-IARC?
UMurphey: "Cha, hhayi ngqo futhi kugxilwe kuphela ku-IARC. Kungu - ngabe bekugxile ekubandakanyeni nasekuxhumaneni nabezindaba nakweminye imisebenzi kwi-glyphosate, ngokuvamile. ”
U-Esfandiary wabe esebuza uMurphey ukuthi ngabe kuzobiza malini inkampani ukwenza ukuhlolwa kwesikhathi eside komdlavuza we-bioassay wemikhiqizo yayo eyenziwe nge-glyphosate, into inkampani evumile ukuthi ayikaze iyenze. UMurphey uthe akazi.
Unyaka we-2016 wawuyisikhathi esibucayi kakhulu seMonsanto ngoba ngaphandle kokubhekana namacala, ilayisensi yenkampani ye-glyphosate yayenzelwe ukuvuselelwa eYurophu, kanti ne-US Environmental Protection Agency nayo ibibuyekeza ukubhaliswa kwe-glyphosate.
YASETSHENZISWA KANJANI IMALI?
Esikhundleni, uMurphey wabuzwa ngombhalo wangaphakathi weMonsanto wangoJulayi 2015 obizwa nge- "IARC Follow Up" owasho umgomo "wokuqeda ukusebenza kwe-IARC" kanye "nokuvikela inkululeko yokusebenza" (FTO). Wabuzwa ngenqwaba yezenzo ezenziwe ukunciphisa noma ukudicilela phansi umsebenzi we-IARC owawubekwe kulokho nakwezinye ukuxhumana kwangaphakathi kweMonsanto. Amakhasi amaningana okufakwa esikhundleni ahlehliswe ngokuphelele, ngokomyalelo wenkantolo, ngakho-ke akunakwenzeka ukubona konke okwakushiwo nguMurphey ekubekweni kwakhe. Kepha nazi izibonelo ezimbalwa zalokho obekuxoxwa ngakho:
Ukukhulisa imiyalezo ye-pro-glyphosate / Roundup ngokusebenzisa “iziteshi ezivela eceleni.” Esinye isibonelo sokusebenzisa iqembu langaphandle ukuphaphaza amaphuzu okukhuluma eMonsanto kwakuyi-athikili eyavela kungxenyekazi yabanikeli beForbes lokho kubonakala kubhalwe nguHenry Miller, ngaleso sikhathi owayengumuntu eHoover Institution eStanford University. Imibhalo yangaphakathi yeMonsanto khombisa ukuthi isiqeshana esigxeka i-IARC empeleni sabhalwa nguMonsanto futhi sathunyelwa kuMiller ngesicelo sokuthi ashicilele izinto zokwakha.
Okunye ukuhamba kwe-Op-Ed. Ngaphambi nje kokuhlukaniswa kwe-IARC, isikhulu esiphezulu seMonsanto uDan Goldstein sixoxe ngezinhloso ezinhlanu zokuqamba u-Op Eds athe ubhalele ukuthi "ososayensi bezobuthi bezokwelapha basebenze" okubandakanya "izigaba zokugxekwa kwe-IARC." UGoldstein ubethumela odokotela nososayensi nge-imeyili ngethemba lokuthi bazokwamukela okusalungiswa njengokwabo futhi bakushicilele, amarekhodi akhombisa. IMonsanto ibitholakala “ukuxhumanisa izinguqulo ze-Op Ed” uma kudingeka, kusho uMurphey esikhundleni sakhe.
Isu lokuthi "Ungavumeli Lutho Luhambe". Ngokusho kukaMurphey, lolu hlelo lubandakanye “ukuqapha ngokucophelela ukusakazwa kwabezindaba” kugxilwe kwi-European Union. "Sinezimakethe eziningi ebesizi - besizibeka eqhulwini," kusho uMurphey. Iphrojekthi ibizele ukuqapha izindaba nokugqamisa noma ukumaka lezo eziqukethe lokho iMonsanto ekubonile njengolwazi olungelona iqiniso noma imininingwane engeyona mayelana nenkampani noma imikhiqizo yayo, noma izindaba ezingafaki umbono wenkampani noma umbono wazo. Othile uzobe esabelwa ukuthi alandele lezo zintatheli, "abize izintatheli ngalezo zimo, abelane ngesitatimende, anikeze okunye okuqukethwe, futhi akhuthaze lezo zintatheli ukuthi zisithinte ngokuzayo," kusho uMurphey.
Ukuqinisekisa intatheli yeReuters ukubhala indaba ebukela phansi ubuqiniso bokuhlukaniswa kwe-IARC ngesinye isibonelo somsebenzi kaMurphey. Ama-imeyili avela ngaphakathi kweMonsanto akhombisile ukuthi uMurphey uthumele i- umugqa wesilayidi wamaphoyinti okukhuluma nokulandisa okuphakanyisiwe kwentatheli yeReuters uKate Kelland emcela ukuba abhale indaba esola u-Aaron Blair, owayengusihlalo weqembu elisebenza i-IARC nge-glyphosate, ngokufihla imininingwane eyayizoshintsha isiphetho se-IARC nge-glyphosate. UMurphey utshele uKelland nge-imeyili ka-Ephreli 2017 ukuthi "bekungolwazi olubaluleke kakhulu oludinga ukubikwa." Uphinde wamtshela ukuthi aphathe imininingwane amthumelele yona "njengemuva," okusho ukuthi angasho ukuthi uthole umqondo wendaba nezinto zokwakha ezivela eMonsanto. UKelland wabe esebhala indaba eyayifunwa uMonsanto. Ukufakwa kuka-Aaron Blair kuveze ukuthi izinsolo ezibekwe endabeni zazingezamanga, kepha uKelland akazange afake ikhophi yokufakwa kwendaba nendaba yakhe. Indaba yaphakanyiswa izinhlangano zeMonsanto nezimboni zamakhemikhali nezikhangiso zeGoogle futhi yathathwa yaphindwa ngabezindaba emhlabeni jikelele. UMurphey uthe esikhundleni sakhe akabeki ingcindezi engenasidingo kuKelland, kanti uMonsanto ukholelwa ukuthi le ndaba iyasebenza futhi ibalulekile. "Lapho senginikeze imininingwane yokuqala ku - UNks. Kelland, wayekhululekile ukwenza lolo lwazi akubona kufanelekile," esho. "Futhi isinqumo sokuphenya udaba futhi ekugcineni - ekugcineni sishicilele kube yisinqumo sakhe, nesinqumo sabahleli bakhe kwaReuters."
UMurphey uthe akukho lutho olubi emizameni eyenziwa nguMonsanto ngemuva kokushicilelwa kombono we-IARC. Uthe uhlelo lwenkampani lubandakanya "ukubambisana nabantu besithathu ukunikezela ngolwazi, ukwabelana ngezindawo zokuxoxa, nezinye izinsizakusebenza" kanye "nokufinyelela kwabezindaba, ukuqinisekisa ukulingana nokunemba, kanye nomongo nombono ofanele ngesayensi ku - ukumbozwa - komkhiqizo wethu. ”
“Njengoba sasiqhubekela phambili, ngemuva kokuhlukaniswa kwe-IARC, futhi, sasingagunci
ukuzibandakanya namaqembu ezolimo, ukuzibandakanya nezintatheli, ukuzibandakanya ezinkundleni zokuxhumana, ukuhlanganyela - ukwabelana ngemibono yenkampani, ”kusho uMurphey kule nhlangano. “Thina - uyazi, sigcine okwethu - besigcina amaqembu ezolimo nabanye benolwazi. Kwasijabulisa ukuthi abaningi babo baqhubeka nokukhuluma futhi ngalokho abakubona njengokuhlukaniswa okungalungile. Kodwa iMonsanto yayihlala njalo, futhi, ngizovele - ngiqonde ngqo ekuhlanganyeleni imibono yethu ngokuhlukaniswa. ”
I-Monsanto Roundup Trial Tracker "Ungavumeli Lutho Luhambe", U-Aaron Blair, I-Anti-IARC, UDan Goldstein, Henry Miller, UKate Kelland, UPedram Esfandiary, USam Murphey